Ujyaalo Sandesh | » मैले आफ्नो ‘ड्रिम ब्वाइ’ भेटिसकेँ – पूर्णिका शाह मैले आफ्नो ‘ड्रिम ब्वाइ’ भेटिसकेँ – पूर्णिका शाह – Ujyaalo Sandesh
मैले आफ्नो ‘ड्रिम ब्वाइ’ भेटिसकेँ – पूर्णिका शाह
२८ असार (काठमाडौं)
पूर्णिकाले राजनीतिमा आफ्नो रुचि नरहेको बताएकी छिन् । पढाइ सिध्याएपछि सधैंका लागि नेपाल फर्किने उनको भनाइ छ । साथै भविष्यमा कुनै आध्यात्मिक कर्ममा संलग्न हुने योजना पनि उनले सुनाएकी छन् ।
पूर्णिकासँगका अन्य केही रमाइला प्रश्नोत्तर यस्ता छन् –
प्रश्न- धेरै नेपाली केटीहरू तपाईंका भाई हृदयन्द्रप्रति हुरुक्क हुन्छन् । उनको बारेमा टिकटक भिडियो बनाउँछन्, दिउँसै सपना देख्छन्, आफ्नो प्रोफाइल पिक्चर परिवर्तन गर्छन् । उनीहरूलाई तपाईंको सन्देश के छ ?
पूर्णिका- सबैको माया र साथलाई हामी कदर गर्छौं ।
प्रश्न- तपाईंको प्रेरणा स्रोत को हो ?
पूर्णिका- मेरी आमा
प्रश्न- तपाईंको सबैभन्दा ठूलो शक्ति के हो र तपाईं तनाव र दबाबलाई कसरी सामना गर्नुहुन्छ ?
पूर्णिका- मेरी आमा नै मेरो सबैभन्दा ठूलो शक्ति हुनुहुन्छ । उहाँले सधैं मलाई राम्रो मान्छे बन्नलाई प्रोत्साहन गर्नुभयो ।
प्रश्न- तपाईंले कहिल्यै कसैलाई थप्पड हान्नुभएको छ ?
पूर्णिका- अँ, हानेकी छु ।
प्रश्न- रोमान्टिक फिल्म कि हरर फिल्म रुचाउनुहुन्छ ?
प्रश्न- थाइल्यान्डमा तपाईं कुन कारमा यात्रा गर्नुहुन्छ ? तपाईंसँग कतिवटा कार छन् ?
पूर्णिका – मसित कार छैन । म यहाँ सार्वजनिक सवारीसाधनमा यात्रा गर्छु ।
प्रश्न- तपाईं आफ्ना भाइबहिनीसँग कत्तिको झगडा गर्नुहुन्छ ?
पूर्णिका- हामी त कुकुर र बिरालो जस्तै झगडा गरिरहन्छौं ।
प्रश्न- तपाईंको चम्किलो त्वचाको रहस्य के हो ?
पूर्णिका- स्न्यापच्याट फिल्टर !
प्रश्न- तपाईंले आफ्नो भाइका फ्यानगर्लहरूको टिकटक हेर्नुभएको छ ?
पूर्णिका- हेरेको छु । ‘क्युट’ छ ।
प्रश्न- तपाईं शाकाहारी हो ?
पूर्णिका- अहिले होइन । भविष्यमा हुन्छु होला ।
प्रश्न- तपाईंको भाइबहिनीको सबैभन्दा राम्रो गुण के हो ?
पूर्णिका उनीहरूको हृदय कोमल छ ।
प्रश्न- तपाईं कहिल्यै एकान्तमा रुनुभएको छ ?
पूर्णिका- रोएको छु ।
प्रश्न- मैले तपाईंका बारेमा दुईवटा कुरा सुनेको छु । तपाईंले संस्कृत पढ्नुभएको छ र तपाईं नेपाली भाषामा राम्रा कविता लेख्नुहुन्छ । यी कुरा सत्य हुन् ?
पूर्णिका- म संस्कृत जान्दिनँ र नेपालीमा कविता पनि लेख्दिनँ ।